Tag: cname | Martech Zone
Ahoana no nahatonga ny zanaky ny zaza maditra, hacked subdomain, nahasaraka an'i Google!
Zoma 30 Novambra 2018 Alatsinainy, 17 Jona, 2019 Douglas Karr
Rehefa misy serivisy vaovao mamely ny tsena izay tiako hosedraina dia matetika aho no misoratra anarana ary manome azy io. Ho an'ny sehatra maro, ny ampahany amin'ny onboarding dia ny manondro subdomain amin'ny mpizara azy ireo mba hahafahanao mihazakazaka ny sehatra amin'ny subdomain-nao. Nandritra ny taona maro dia nanampy subdomain am-polony izay nanondro serivisy samihafa aho. Raha nesoriko ny serivisy dia matetika aho tsy nisahirana nanadio ilay